Ilungelo Lase-US Lokwazisa I-EPA Ngokukhishwa Kwemibhalo YeGlyphosate - Ilungelo Lase-US Lokwazi
Posted on Mashi 9, 2017 by UGary Ruskin
Ukukhishwa Ngokushesha: NgoLwesine, Mashi 9, 2017
I-US Right to Know, inhlangano ebhekela abathengi, yafaka umfelandawonye icala ngoLwesine ngokumelene ne-Environmental Protection Agency ngokuphula umthetho weFreedom of Information Act (FOIA). IPublic Citizen Litigation Group, inkampani yabameli bezintshisekelo zomphakathi eWashington, DC, imele i-US Right to Know kulesi senzo.
The icala, efakwe eNkantolo yesiFunda e-US eWashington, DC, ifuna imibhalo ehlobene nokuhlolwa kwe-EPA ngekhemikhali eyimpikiswano ebizwa ngokuthi i-glyphosate. IGlyphosate umuthi wokubulala ukhula osetshenziswa kakhulu emhlabeni futhi uyisithako esiyisihluthulelo semithi yokubulala ukhula ebizwa ngokuthi yi-Roundup yeMonsanto Co. kanye neminye imikhiqizo yokubulala ukhula. Ukukhathazeka ngaleli khemikhali sekukhulile selokhu iWorld Health Organisation ngo-2015 yathi ochwepheshe bayo bomdlavuza bahlukanisa i-glyphosate njenge- kungenzeka i-carcinogen yomuntu. Abanye ososayensi nabo bathe ucwaningo lukhombisa izinkinga zokuphepha ngamakhemikhali kanye nokwakheka okusetshenzisiwe kuwo.
I-US Right to Know icele amarekhodi e-EPA ngemuva kokuthi i-EPA ithumele imemorandamu yangaphakathi enesihloko esithi “I-GLYPHOSATE: Umbiko weKomidi Lokubuyekeza Ukuhlolwa Komdlavuza”Kwiwebhusayithi yalesi sikhungo ngo-Ephreli 29, 2016. Umbiko wangaphakathi we-EPA, owaziwa njengombiko we-CARC, uphethe ngokuthi i-glyphosate“ kungenzeka ingabi umdlavuza kubantu. ” I-EPA bese ususa okuthunyelwe esidlangalaleni ngoMeyi 2, ethi lo mbhalo uthunyelwe ungahlosile. Kepha ngaphambi kokuthi isuswe izikhulu zeMonsanto zikopishe lo mbhalo, zayithuthukisa kuwebhusayithi yenkampani nakuzo izinkundla zokuxhumana zayikhomba enkantolo lapho kubhekwa khona amacala afakwe ngabasebenzi bezolimo nabanye abasola ukuthi ukubulala ukhula kukaMonsanto kwabanikeza umdlavuza.
Isicelo sika-Meyi 12, 2016 se-FOIA sicele amarekhodi athile aphathelene nombiko we-CARC we-glyphosate kanye namarekhodi ezokuxhumana phakathi kwezikhulu zeMonsanto ne-EPA ezidingida izindaba ze-glyphosate. Ngaphansi kwe-FOIA, i-EPA ibinezinsuku zokusebenza ezingama-20 ukuphendula isicelo, kepha sezidlulile izinsuku ezingaphezu kwezingu-190 zokusebenza kanti i-EPA isazokhiqiza amarekhodi ukuphendula isicelo. I-EPA nayo yehlulekile ukuhambisana nezicelo ezifanayo, zakamuva ze-FOIA ezenziwe yi-US Right to Know zemibhalo yokusebenzisana kwe-EPA neMonsanto mayelana ne-glyphosate, yize lezo zicelo zingeyona ingxenye yalolu cala.
I-US Right to Know yinhlangano engenzi nzuzo esebenza ukuthuthukisa ukusebenza obala kanye nokuziphendulela ohlelweni lokudla lwesizwe. Ngeminye imininingwane mayelana ne-US Right to Know, sicela ubone www.usakht.org.
I-Public Citizen Litigation Group ibanga amacala abandakanya uhulumeni ovulekile, imithetho yezempilo nokuphepha, amalungelo abathengi, ukufinyelela ezinkantolo, kanye neSichibiyelo Sokuqala. Ingalo ebanga icala lenhlangano kazwelonke, engenzi nzuzo yokukhuthaza abathengi, iPublic Citizen. I-Litigation Group ivamise ukumela abantu nezinhlangano ezifuna ukufinyelela kumarekhodi ngaphansi koMthetho Wenkululeko Yolwazi. Imininingwane engaphezulu ingatholakala ku- www.citizen.org.
Ukukhishwa Kwezindaba, Uphenyo lwethu, Amacala ethu, izibulala-zinambuzane